Hiran State - News: Shiikh Shariif shaleyto shacabka gobolada dhexe manta Jubooyinkae
Shiikh Shariif shaleyto shacabka gobolada dhexe manta Jubooyinkae
HS:-Shacabka jubooyinka oo isku diyaarinaya sidii ay ula shaqeyn lahaayeen maamulka Azania iyadoo goobkasta oo Shabaab laga saaro ay ka ariminayaan masuuliyiintii ay shabaab degaanadaasi kala wareegeen.
Marka xaalada dhinac kasta laga eego shacabku ma doonayaan fowdo danbe, qabqable dagaal iyo kooxaha arkakixisada ah toona. ha yeeshee Shiikh Shariif waxuu hada doonayaa in jubooyinka uu u qaso sidii uu u qasay bulshada Hiiraan dhawr sano ka hor xili ay doonayeen iney Shabaab ka saaran magaalada Belet Weyne kadibna magaalada Mogdisho ka soo diray dhalinyaro uu lacag u soo dhibay si ay ciidamada u kala fur furaan.
Ujeedada uu Shariifka arintaasi ka lahaa waxey aheyd in ay Shabaab Hiiraan sii joogto ilaa markii lagu dhawaaqay dowlad goboleedka Hiiraan State mid ka mid ah dhalinyaradii uu lacagta u soo dhiibi jiray uu yiraahdo waxaad ku dhawaaqdaa maamul lagu carqaladeynayo Hiiraan State sida uu isagu afkiisa ka sheegtay Shariifka.
Hadaba Shaiikh Shariif qorshe arintaasi la mid ah ayuu doonayaa inuu kula macaamilo Jubooyinka isagoo isticmaalaya hogaamiyaal ka tirsan Shabaabka kuwooda ka soo jeeda Mogdisho iyo nawaaxigeeda si iyaguna ugu dhaartaan dowlada Kenya isaguna u isticmaalo masuuliyada madaxweynenimo oo uu ka horyimaado rabitaanka bulshada jubooyinka oo iyagu doonaya meeshii laga saaro Shabaab iney noqoto goob leh nidaam iyo kala danbeyn halka Shariifka iyo xulufadiisaa ay kaka dhagtay beelo Somaliyeed oo degaankaasi dagan si aysan u sameysan maamul goboleed taasi bedelkeeda Shabaab iney sii joogto ku dhiiragelinayo oo ay shacabku noqdaan fowdo u joog.
Laakinse xaalku wuu ka duwan yahay sida ay dad badan moodaan oo Hiiran marka uu rabshadahan ka waday aduunyadu ma ogeyn inuu howlahaasi ku lug leeyahay hadase wadamada deriska ilaa kuwa daneeya arimaha Somaliya ayaa og in Shariifka dhiirageliyo in aan koxahaan dalka laga saarin.
Sida warar lagu kalsoonan karo ay sheegayaan marka laga soo tago shaqsiyaad Mogdisho laga soo diray oo aan iyagu wax ujeedo ah wadan dantooda gaarka ah maahane ay inta badan shacabka jubooyinka doonayaan maamul iyo kala danbeyn maamulka Azaniyana waa midka kaliya ee midabka rasmiga ah ee Shiikh Shariif tusin doono inuu qeyb ka yahay mushkilada Somaliya ee uusan aheyn madaxweyne Somaliyeed aduunyada.
Sidoo kale mar aanu xiriir dhinaca isgaarsiinta ah la yeelanay waxgarad ka soo jeeda jubooyinka iyo Gedo ayaa inoo xaqiijiyeen in aysan maamulka Azaniya ka hor waligood arag dad kala tashda arimaha Jubooyinka oo ugu yaraan u soo bandhiga waxa ay damacsan yahiin mustaqbalka dhaw iyo kan fogba laakisne ay arki jireen umad dooneysa in wax la boobo oo kaliya, shirkii weynaa ee ay dowlad goboleedka Azaniya ku qabteen dhawantaan dalkaasi Kenya magaalo ka mid ah oo leyskugu keenay inta badan qabiilada Jubooyinka waxey waxgaradkii halkaasi iskugu yimid shegeen hadii waqti la siiyo ku filan mamulka Azaniya lana toos toosiyo in ay wax badan ka duwanaan karan kooxahii horey u maamuli jiray halkaasi oo ay ula jeedeen qabqablayashi dagaalka.
Dhawantaan mar la wareystay madaxweynaha Azaniya ayuu sheegay in Shiikh shariif uu yahay shaqsi aan diyaar u aheyn inba Shabaab dalka laga saaro taasi bedelkeeduna uu ka doorbidayo in wadanku uu markasta qalalaasahan ku sii jiro. arintaasi reer Hiiraan iyo shacabka gobolada dhexe horey ayey u arkeen ee bal shacbaka jubooyinka ha nala arkeen ayuu yiri Shiikh Abdulaahi oo ah muwadin reer Hiiraan ah oo qurbaha ku nool.
Wararkii ugu danbeyey ayaa sheegaya in saraakiil ka socota TFGda oo loogu talo galay iney wax ka ogaadaan howlgalka ciidamada kenya iyo kuwa jubooyinka uu Shiikh Shariif si qarsoodi ah ugu diray halkaasi si marka ay doonayan iney dagaal ku qaadaan magaalada Kismaayo loo fashiliyo oo sirta dagaalka loo siiyo Al Shabaab.
Laakinse dowlada kenya wey ka dheregsan tahay arintaasi oo dad iyada la shaqeeya ayaa macluumaadka si isadaba joog ah uga soo siiya degaanada ay Shabaab maamusho ilaa Mogdisho.
Hadaba masuul sheeganayo inuu yahay madaxweyne Somaliyeed oo waliba aan war iyo wacaal u heyn nolosha malaayin Somaliyeed oo ku nool gobolada dalka ciidamo African ahne ku wardiyeyaan magaalada Mogdisho oo kaliya oo aan dooneyn in wadankiisa looga xoreeyo argagixisada oo marka qeyb bulshada Somaliyeed ka mid ay doonayaan iney arimahooda u gaarka ah ka tashadan oo ay sameystaan maamul ay ku qanacsan yahiin ka shaqeeya sidi uu u fashilin lahaa miyuusan kooxahaas ka tirsaneyn?
Sida muuqata arinta Jubooyinka meel ayey u dhaceysaa oo marka Shabaab laga saro magaalda Kismaayo iyo xiliga Shariifka uu weynayo masuuliyada uu ku magacaaban yahy ayaa isku mid noqon doonta madama uu qilaaf kala dhaxeyo C/wali Gaas oo hormuud u ah sidi ay jubooyinka ula wareegi lahayen maamulka Azaniya Shabaabne looga saari lahaa.
Shiikh Shariif waa masuul meel cidla ah taagan amrka laga hadlayo siyaasadahan isbedbedelka badan ee ka taagan Somaliya iyo dunida inteeda kale,
· admin on November 14 2011 16:48:43 · 0 Comments · 1996 Reads ·
14,605,583 unique visits